သိပ္ပံပညာအရကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမယ့်အချက် ၅ ချက်• musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း ပုံ သိပ္ပံပညာနှင့်အညီသင့်အားကျန်းမာစေမည့်အရာ ၅ ခု
မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်ခြင်း၊ သာယာခြင်း၊ ပိုမိုကျန်းမာခြင်းတို့ကိုအမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါ။ သိပ္ပံပညာကပင်ဤသို့ဆိုရလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။
သင်ပျော်ရွှင်ရန်ကူညီရန်လုပ်ရန်အရာ (၅) ခုရှိပါသည် နှင့်သိပ္ပံအရသိရသည်ကျန်းမာ။
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပန်းခြံတစ်ခု၊ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်သို့မဟုတ်တောအုပ်များတွင်လေထုထဲတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်ကောင်းသောဟော်မုန်းများဖြစ်သော endorphins ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တင်းမာမှုကိုသက်သာစေရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေသည်။
သင်အမှိုက်ပုံထဲရောက်နေပြီလား၊ ဝမ်းနည်းနေလား? ချောကလက်အမည်းရောင်သည် tryptophan တွင်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် serotonin ၏အမိုင်နိုအက်ဆစ်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကောင်းသည်။ ဒီအမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်စိတ်ကြွစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများကိုခန္ဓာကိုယ်၏တုန့်ပြန်မှုကိုတိုးတက်စေသည့် neurotransmitter ဖြစ်သော dopamine ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်။
သင်တင်းမာနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေပါသလား သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကိုနားထောင်ပါ။ “ no” အချိန်လေးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးပြန်လည်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဂီတဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုလွှတ်ပေးရန်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့သည် ဘဲလ်ဖတ်ဘုရင်မတက္ကသိုလ် PLOS One မဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ခရီးသွားခြင်း၊ နေရာအသစ်များကိုသိခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ပြောဖို့ကတော့လေ့လာမှုပဲ "အံ့ Life စရာကောင်းသည့်ဘဝ။ အတွေ့အကြုံစားသုံးမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေခြင်း", စားသုံးသူစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးမူဝါဒကိုရယူခြင်းသည်အေးအေးဆေးဆေးနေရန်နှင့်သင်၏သုခချမ်းသာတိုးတက်စေရန်အတွက်နောက်ထပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံမှုပေးပြီးသင့်အားကာကွယ်ပေးသည်။ မိသားစုတစ်စုလုံး၊ လူကြီးများ၊ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Europ Assistance သည် Eura Salute 360 ​​ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်၏အခြေခံသည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အကူအညီပေးရေးအထုပ်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်သင်လိုအပ်သောဆေးဝါးများကိုလက်ခံရန်နှင့်သွားဆရာ ၀ န်များ၊ ဇီဝကမ္မကုထုံးပညာရှင်များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ဗီဒီယိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့်ဆရာဝန်နှင့်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် Myclinic platform မှနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လျှော့နှုန်းထားမှာစင်တာများ။ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ကလေးထိန်းများ၊ အိမ်ဖော်များနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်သူများ၏အကူအညီဖြင့်အိမ်တွင်းအကူအညီများ။ ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ် - ကုသမှုလမ်းကြောင်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် Care Manager အတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောအကူအညီအစီအစဉ်နှင့်ဗီဒီယိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွင်လူနာ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကို အခြေခံ၍ အသင့်တော်ဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပြ။
နေ့စဉ်ကူညီပံ့ပိုးမှုအထုပ်အပြင်မတော်တဆထိခိုက်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် LTC အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။
Eura Health 360 သည်အသေးငယ်ဆုံးမှအကြီးမားဆုံးအထိနေ့စဉ်အသက်တာမှအရေးပေါ်အစရှိသည့်မည်သည့်ကျန်းမာရေးပြfaceနာကိုမဆိုခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောနာမကျန်းခြင်း၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအာမခံကာကွယ်မှုကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းရမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
ဆောင်းပါး သိပ္ပံပညာနှင့်အညီသင့်အားကျန်းမာစေမည့်အရာ ၅ ခု အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ဟန်ရှိသည် Vogue Italia.
ယခင်ဆောင်းပါးWeborama က "Contextual Semantic Artificial Intelligence: ဒီနေ့မနက်ဖြန်ရဲ့ကြော်ငြာကိုတည်ဆောက်ကြစို့" ဟူသော webinar ကိုတင်ဆက်သည်။
နောက်ဆောင်းပါးဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၁၉၈၀။ John Lennon မပါသောကမ္ဘာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ဆွဲဆောင်မှု၏နိယာမ - ဘဝမှသင်လိုချင်တာအားလုံးကိုရရှိနိုင်ပုံ